Mpihira Kirgyz Namoaka Hira Mampihovitrovitra Amin’ny Fanokafana ny Games Of Thrones · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2016 6:10 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Italiano, Português, Español, Français, 日本語, srpski, English
Dikasary avy amin'ny lahatsary YouTube navoakan’i Zanoza.kg.
Manan-javatra maro iraisana ny “Games of Thrones” sy i Kyrgyzstan — endri-tany mahatonga hanao poezia, fomba fiakanjo mahavalalanina ary ny safotofoto ara-politika zary mahazatra ifandroritan'ny mpihazom-pahefana tavaratra sy tatsimo.
Ankehitriny ny mpihira Kyrgyz avy amin'ny tarika vako-drazana Ordo Sakhna namoaka hira fanokafana fampisehoana tsy mbola fandre mihitsy teo aloha, tao anaty fampisehoana notontosain'ny seha-pampitam-baovao tao an-toerana Zanoza.kg sy ny Internews mpanohana ny fampivelarana ny fampitam-baovao miorina ao Washington.
Hira vako-drazana Kyrgyz
Namelona indray ny fahalianan'ilay firenena aziatika afovoany indray amin'ny zavamaneno nentim-paharazana ny fahalaovantena, ary tsy misy mahahoatra ny komuz, izay hita mandrakariva amin'ny isan-tokantrano Kyrgyz sady ny tiana indrindra amin'ireo rindrankira nasionaly manamarika fotoan-dehibe.
Zavamaneno Kyrgyz misongadina ao amin'ny vola taratasy iray som izay efa tsy nivoaka sy tsy manankery intsony.
Saingy na tamin'ny vanim-potoana Sovietika aza, dia efa fanta-daza tokoa ny fitiavan'ny mpiray firenena ilay zava-maneno, araka ny porofoin'ity sombiny avy amin'ilay Olomanga Kyrgyz mpanoratra antsoina hoe Chingiz Aitmatov ao amin'ny boky Zazavavy manao folara mena:
Heno tao amin'ny onjam-peo ny gadon-kira iray fantatro, nolalaovina tamin'ny komuz. Hira Kyrgyz nahatonga ahy hieritreritra hatrany mpitaingin-tsoavaly tokana manavatsava ny fatrana (lemaka tsy misy mpikarakara). Mbola lavitra ny dia hotontosainy, midadasika ny fatrana, afaka mieritreritra amim-panalanandro izy ary mikalo hira iray tsimoramora, mihira izay ao am-pony. Manana zavatra maro hoeritreretina ralehilahy rehefa manirery izy, ary ny hany feo mbola reny avy ao amin'ny fahanginana dia ny fikatroky ny kitron-tsoavaly misy gadona. Mikarantsana tsimoramora ny tadin'ny komuz, tahaka ny rano mikoriana amin'ny vatolampy malama sy madio. Nihira ny filentehan'ny masoandro any ambadiky ny havoana ny komuz, ny rivotra manga mangatsiatsiaka mamafa mangina ny tany, sy ny ahidratsy sy ny bozaka komavoka voatopatopa sy voakipilipily, mandraraka ny vovombony amin'ny lalana nodanihin'ny masoandro. Hihaino ilay mpitaingi-tsoavaly ny fatrana ary hihira hiaraka aminy.. .
Raha hihaino hira nentim-paharazana Kyrgyz maro kokoa, loharanom-baovao tena tsara amin'ny teny anglisy momba izany ny bilaogin'i Dennis Keen KeenonKyrgyzstan.